Dawladda, iyo Xisbiyada siyaasadda ee dalka oo ka wada hadlay dib u dhigista doorashada. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dawladda, iyo Xisbiyada siyaasadda ee dalka oo ka wada hadlay dib u dhigista doorashada.
On Apr 29, 2020 1,000
Addis Ababa, April 29, 2020 (FBC/SOMALI) –R/Wasaare, Dr Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxda sare ee xisbiyada siyaasadda ee dalkan JDFI, si ay uga wada hadlaan xaaladda COVID-19, iyo in dib loo dhigo jadwalka doorashada qaran iyo xulashooyinka sharciga ah.
Dowladda ayaa horey u soo bandhigtay afar ikhtiyaar oo la xidhiidha dib u dhigista doorashada ,sababo la xidhiidha cudurka dilaaga ah ee karoona fayras ee dalka ka jira. Doorashada ayaa markii hore qorshuhu ahaa inay qabsoonto bisha Agoosto 29, 2020.
Kuxigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud JDFI , Dr. Gedion Timotiwos, ayaa soo bandhigay afarta ikhtiyaar ee ay dowladdu u soo jeedisay in wax looga qabto arrimaha la xidhiidha doorashooyinka.
Waxaana ay u dhignaayeen sidan:
1. Kala diridda Golaha Wakiilada (Baarlamanka)
2. Ku dhawaaqidda Xaaladda Degdegga ah
3. Wax ka bedelka dastuurka, iyo
4. Sheegidda fasiraadaha dastuurka